Baarlamaanka DDSI oo meelmariyey golaha wasiirada cusub | Radio Hormuud
Ciidamo fara badan oo lagu soo daadiyay Muqdisho iyo cabsi la xiriirta banaanbaxyo dhaca
Madaxweynaha Somaliland Oo Safar Shaqo Ugu Baxay Dalka Isu-Tagga Imaaraadka Carabta
Cabdilaahi Dool oo u waramey wargeys ka soo baxa dalka Israel.
Mareykanka oo sheegey in ay soomaaliya ku dileen ninkii labaad ee usareeyay IS ama Daacish
Qarax xooggan oo ka dhacay Muqdisho
Baarlamaanka DDSI oo meelmariyey golaha wasiirada cusub
Jigjiga (RH)-Baarlamaanka dowlad deeganka Soomaalida Itoobiya, ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Jigjiga, waxa ay ku meel mariyeen golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay madaxweynaha la doortay Mustafe Muxumad Cumar.
Golaha wasiirada cusub ee DDSI ayaa ka kooban 27 wasiir.
Madaxweynaha cusub Mustafe Muxumad Cumar, afhayeenka baarlamaanka Maxamed Rashiid iyo guddoomiyaha xisbiga dimuquraadiga shacbiga Soomaaliya Axmed Shide ayaa kulanka ku sugnaa maanta.
Sidoo kale, waxaa la ansixiyey hantidhowrka guud ee dowlad deeganka Soomaalida Itoobiya Ismaacil Axmed oo horrey u soo shaqeeyay.
Sidoo kale, waxaa la ansixiyey xafiiska macdanka iyo tamarta kaasoo si toos ah u la xiriira arrimaha batroolka oo la rabo in gobalka Soomaalida Itoobiya laga soo saaro.
Haddaba, maxay golaha wasiirka cusub uga baddalan yihiin golihii horre ee Cabdi Maxamuud Cumar.
Sida ay lee yihiin weriyayaasha iyo dadka siyaasadda gobalka Soomaalida la socda, waxa ay lee yihiin golihii horre 40% waxa ay ahaayeen dumar, balse golaha wasiirada cusub labo dumar ayaa ku jira 27 kalena waa rag.
Sidoo kale, badi golaha wasiirada cusub waa kuwa aqoon leh oo illaa heer shahaado master ah, sidoo kale waa kuwa ku cusub dowlad deeganka Soomaalida Itoobiya waayo waa ay ka maqnaayeen intii xukunka hayey Cabdi Maxamuud Cumar oo bishii horre lagu qasbay in uu is casilo, waxaana la soo taagay maxkamad iyadoo loo heesto eedo la xiriira goboolfalo ka dhacay deeganka intii uu xukunka hayey.
Nin Soomaali ah oo lagu xidhey Cisbitaal dhimirka ah kaddib markii uu kufsaday haweeney Denish ah
Denmark: Dibunoqoshada oo lagu dhiirigalinayo dhaqaale.
Kolding: Saddexdii Sarkaal Ee Ugu Sareeyey Waxbarashada Degmada Oo Shaqadii Laga Eryay
wareysi laga qaadey in reer galbeed ah oo booqdey mararbadan Somaliland.
Fajr 04:15 04:23 04:24 04:13
Shuruq 05:55 06:03 06:04 05:53
Dhuhr 13:10 13:18 13:19 13:08
Asr 17:03 17:11 17:12 17:01
Maghrib 20:23 20:31 20:32 20:21
Isha 21:57 22:05 22:06 21:55
Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi Oo Majaro Habaabisay…
Kolding: Saddexdii sarkaal ee ugu sareeyey waxbarashada…
Heshiiskii Shiikha iyo Garyaqaanka
War Deg-Deg Ah Madaxweynaha Somaliland Oo isku-…
Trump frikendte sig selv - nu frigives Rusland-rapport endelig
AGF-sejr sikrer overlevelse
Billetrekord ved kvinde-VM